दैनिक राशिफल: वि.सं. २०७६ भदौ २० गते शुक्रवार, इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर ६ - Sutra TV Sutra TV
दैनिक राशिफल: वि.सं. २०७६ भदौ २० गते शुक्रवार, इ.स. २०१९ सेप्टेम्बर ६
मेष : स्वास्थ्यको लागि केही ध्यान राख्नु आवश्यक छ। तपाईं एउटा रोमाञ्चक नयाँ परिस्थितिमा आफूलाई भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई वित्तीय लाभ हुनेछ। तपाईंले चाहनुभएको सबै ध्यान प्राप्त गर्नुहुने आज राम्रो दिन छ । तपाईंले धेरै कुराहरू लहरै पाउनुहुनेछ र तपाईंलाई के चाहिं लिनु हो भन्ने निर्णय लिन समस्या पर्नेछ। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। आज तपाईं उपस्थित भएका व्याख्यान र सेमिनारले विकासको लागि नयाँ विचार ल्याउनेछन्। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईंका आज आमाबाबुले कुनै साँच्चै नै आश्चर्यजनक कुराले तपाईंको जोडीलाई आशीर्वाद दिन सक्छन् जसले अन्ततः तपाईंको वैवाहिक जीवनमा विकास ल्याउनेछ।
वृष : तनाउलाई बेवास्ता गर्नु पर्दैन। यो तीव्र गतिमा सुर्ती र रक्सी झैं गम्भीर रूपमा एउटा महामारी बन्दैछ। वित्तीय अवरोधबाट बच्नको लागि आफ्नो बजेट हेर्नुहोस्। तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा मित्रहरूले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्नेछन्। मोमबत्तीको उज्यालोमा प्रियसँग खाना खानुहोस्। आफ्नो क्यारियरको आशा बढाउनको लागि आफ्नो व्यावसायिक शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्नो गतिविधिको क्षेत्रमा असीमित सफलता पाउने सम्भावना छ। धेरै फाइला पाउन आफ्नो सबै कौशल लगाउनुहोस्। परमेश्वरले आफूलाई मद्दत गर्नेहरूलाई मद्दत गर्दछन् भन्ने तपाईं याद हुनु आवश्यक छ। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
मिथुन : तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा प्रवेशको लागि राम्रो समय। रोमान्टिक अमूर्तताले तपाईंको आनन्दमा मसला थप्नेछ। तपाईंको जोडीको सामना गर्न कठिन हुनेछ। यात्रा र शैक्षिक गतिविधिहरूले तपाईंको जागरूकतामा बृद्धि गर्नेछ। तपाईंलाई आजको दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन अनुभव हुनेछ।
कर्कट : अगाडि राम्रो समय आउँदैछ भनेर खुशी हुनुहोस्, र तपाईंलाई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। तपाईंले जानेका मानिसहरूको माध्यमबाट आयका नयाँ स्रोतहरू उत्पन्न हुनेछन्। सुखद र सुन्दर साँझको लागि तपाईंको घरमा अतिथिहरूको भीड लाग्नेछ। तपाईंले अब उप्रान्त आफ्नो कामुक कल्पनामा बारेमा सपना देख्नु आवश्यक छैन, तिनीहरू आज साँचो हुन सक्छन्। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। आफ्नो जोडीको निर्दोष कार्यले आज तपाईंको दिन शानदार बनाउनेछ ।
सिंह : तपाईंको बलियो लचक र निर्भयताले मानसिक संकायको शक्ति धेरै बढाउनेछ। यो गतिलाई चलाई राख्नुहोस् जसले गर्दा कुनै पनि अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न तपाईंलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा नराम्रो वित्तीय स्थितिको कारण रोक लाग्नेछ। तपाईंको मनमा दबाब छ भने, आफन्तहरू वा घनिष्ठ मित्रहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, यसले तपाईंको टाउकाको भारी कम गर्नेछ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीलाई नभएर अन्य कसैलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्ने मौका दिनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीको प्रतिकूल प्रतिक्रिया पाउन सक्नु हुनेछ।
कन्या : तपाईंको लागि धेरै खुशी र आनन्द, किनभने तपाईंले जीवनको पूरा आनन्द उठाउने तय भइसकेको छ। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस्, कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस्। घरमा छोराछोरीले अनुपात बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न गरेर तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्, कुनै पनि कदम चाल्नु अघि तथ्य प्रमाणित गर्नुहोस्। आज तपाईंलाई प्रेमले बाँध्नेछ। यसको परम आनन्द महसुस गर्नुहोस्। तपाईं मेहनत र धैर्य मार्फत आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। घरमा संस्कार र हवन र शुभ समारोह गरिनेछ। आज आफ्नो जोडीसँग शारीरिक सम्बन्ध सबै भन्दा राम्रो हुनेछ।
तुला : घरेलु चिन्ताले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन सक्छ। त्यसै बसिरहनु भन्दा पैसा कमिने केहीमा किन संलग्न हुनुहुँदैन, यसले तपाईंको कमाउने शक्तिमा सुधार हुनेछ। तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने नभन्नुहोस् किनकि उनले अरू कसैलाई यो कुरा भन्न सक्छिन्। तपाईंको आफ्नो प्रिय जोडीले गरेको फोनले तपाईंको दिन शुभ हुनेछ। आफ्नो काममा लाग्नुहोस् र आज आफ्नो कामको लागि मद्दत गर्न अरूलाई नभन्नुहोस्। गफ र अफवाहहरुबाट टाढा रहनुहोस्। एउटा सानो प्रयासले आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
वृश्चिक : तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। आफ्नो खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्र्, आज आवश्यक वस्तुहरू मात्र किन्नुहोस्। अरूलाई प्रभावित गर्ने तपाईंको क्षमताले फाइदा पुर्‍याउनेछ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले आज आफ्नो दृष्टिकोणमा र कार्यालयको कामको गुणस्तरमा सुधारको अनुभव गर्नु हुनेछ। व्यापारको उद्देश्यको लागि गरिएको यात्रा लामो समयपछि लाभदायी साबित हुनेछ। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज प्रेम गर्न पर्याप्त समय प्राप्त भएको छ जस्तो लाग्छ।
धनु : एउटा लाभदायी दिन हो र तपाईं दीर्घ रोगबाट राहत पाउन सक्षम हुन सक्नुहुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। परिवारको भेलामा तपाईं सबैको केन्द्रविन्दु हुनुहुनेछ। आज साँझ जिस्क्याउने कार्यमा नलाग्नुहोस्। आज अनुभवी मान्छेसँग मिलेर तिनीहरूबाट केही सिक्नुहोस्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने, त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। आफ्नो जोडीको अशिष्ट व्यवहारले आज तपाईंलाई केही कष्ट हुन सक्छ।
मकर : इच्छा शक्तिको कमीले तपाईंलाई भावनात्मक र मनोवृत्तिको सिकार बनाउन सक्छ। आफ्ना मित्रको मद्दतले वित्तीय समस्याहरुको समाधान गरिनेछ। तपाईंले संगै बसेको कसैसित तर्क नगर्नुहोस्, यदि कुनै विवादास्पद मुद्दाहरू भएमा मित्रवत हल गर्नुपर्छ। प्रेमको चस्काले तपाईंलाई आज सुत्न दिंदैन। कार्यस्थलमा वरिष्ठ साथै सहयोगिहरुबाट समर्थन प्राप्त हुनाले तपाईंको हौसला बढ्नेछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवन आफ्नो परिवारबाट धेरै नै प्रभावित हुन सक्छ, तर तपाईंहरू दुवैले बौद्धिमानी भएर कुराहरूको संचालन गर्ने व्यवस्था गर्नु हुनेछ।
कुम्भ : तपाईंको बाल्य प्रकृति निस्किने छ र तपाईंमा चञ्चल मुड आउनेछ। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। तपाईंका नजिकका मानिसहरूले व्यक्तिगत स्तरमा समस्या सिर्जना गर्नेछन्। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। आज तपाईं उपस्थित भएका व्याख्यान र सेमिनारले विकासको लागि नयाँ विचार ल्याउनेछन्। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई खिचलो बनाउन सक्ने सम्भावनाहरू आउनेछन् र लामो अवधिसम्म पनि तपाईंको सम्बन्ध राम्रो नहुन सक्छ।
मीन : आज तपाईंले धेरै खिचलो र फरक विचारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ जसले तपाईंले रिस उठ्ने र अप्ठ्यारो गर्नेछ। लामो अवधिको लाभको लागि स्टक र आपसी धन लगानीमा सिफारिस गरिन्छ। घरेलू विषय र बाँकी रहेका घरेलू काम सक्ने अनुकूल दिन। सुंदर मुस्कानले आफ्नो प्रेमीको दिन उज्यालो पार्नुहोस्। कामका सम्भावनाहरुका लागि गरिएको यात्राले सकारात्मक परिणाम दिनेछ। तपाईंले आफ्नो धैर्य राख्नु र साक्षात्कारको समयमा आफूलाई व्यक्त गर्नु आवश्यक छ। महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग बातचीत गर्दा तपाईंको शब्दहरू होशियारीसँग चुन्नुहोस्। आज, तपाईंले आफ्नो जोडीसँग जीवनको सबैभन्दा राम्रो साँझ बिताउन पाउनु हुनेछ।